fahamarinana Archives - Sword Cross sy Crown
Matoky ny fahamarinanao manokana ve ianao na ny fahamarinan'Andriamanitra?
Janoary 12, 2021 sklindsey
Matoky ny fahamarinanao manokana ve ianao na ny fahamarinan'Andriamanitra? Ny mpanoratra ny Hebera dia manohy manentana ireo mpino hebreo mankany amin'ny 'fitsaharany' ara-panahy - “Fa izay niditra tamin'ny fitsaharany dia nitsahatra koa [...]
Ahoana ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra?
Enga anie 12, 2020 sklindsey
Ahoana ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra? 'Hamarinina' isika, nampidirina tamin'ny fifandraisana 'mety' amin'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy - [...]
Matoky ny fahamarinan'Andriamanitra ve ianao, sa amin'ny tenanao manokana?
Desambra 8, 2019 sklindsey
Matoky ny fahamarinan'Andriamanitra ve sa anao ianao? Nanohy ny taratasiny ho an'ny mpino Romana i Paoly - "Ankehitriny tsy tiako tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, ny nitoriako matetika [...]